Apple Xiaomi Dethrones Apple ho mpanamboatra smartphone lehibe faharoa manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Apple Xiaomi Dethrones Apple ho mpanamboatra smartphone lehibe faharoa manerantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • fiantsenana • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Xiaomi Shinoa dia mandroaka an'i Apple ho mpanamboatra finday avo lenta faharoa manerantany
Ny fandefasana entana Xiaomi dia nisondrotra 300% tany Amerika Latina ary 50% tany Eropa Andrefana, raha oharina tamin'ny taona lasa.
Xiaomi dia mampitombo ny orinasany any ivelany haingana.
Ny fahombiazan'i Xiaomi dia avy amin'ny fiakaran'ny vidin'ny smartphone an'ny 83% vao haingana.
Raha ampitahaina amin'ny Samsung sy Apple, ny vidin'ny fivarotana Xiaomi dia manodidina ny 40% ary 75% mora kokoa.
Ny Xiaomi Corporation an'i Shina dia nahazo anjara 17% tamin'ny fandefasana finday avo lenta erantany tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny 2021, tao aorinan'ny Samsung misy 19%, ka izany no lasa mpanamboatra finday avo lenta faharoa manerantany, nandresy ny mpifaninana Etazonia. Apple Inc amin'ny 3% amin'ny fandefasana entana manerantany. Nahazo ny laharana fahatelo i Apple, miaraka amin'ny 14% ny tsena.
"Xiaomi dia mampiroborobo haingana ny orinasany any ampitan-dranomasina, "hoy ny masoivohon'ny fikarohana Canalys tamin'ny fanambarana an-gazety, nanamarika ny fandefasana Xiaomi dia nitombo 300% tany Amerika Latina ary 50% tany Eropa Andrefana, raha oharina tamin'ny taona lasa.
Ny tatitra Canalys dia nanosika ny anjaran'ny orinasa sinoa 4.1% avo kokoa amin'ny varotra zoma. Ny fahombiazan'i Xiaomi dia avy amin'ny fiakarana 83% tato ho ato amin'ny fandefasana smartphone an'ny orinasa, manohitra ny fiakarana 15% ho an'ny Samsung ary fitsambikinana 1% fotsiny ho an'i Apple.
Nandritra ny fidirany tao amin'ny tsenan'ny finday avo lenta, ny mpamokatra ny zava-drehetra manomboka amin'ny mpanadio robot ka hatramin'ny vilany dite elektronika dia nanangana smartphone roa tonta hatreto tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny Mi 11 Ultra izay manolotra iray amin'ireo sensor fakantsary lehibe indrindra napetraka ao anaty smartphone. Na izany aza, ny vidin'ny vidin'ny smartphone Xiaomi dia ambany dia ambany raha oharina amin'ny Samsung sy Apple, izay mahasarika ny mpanjifa hatrany.
“Raha ampitahaina amin'ny Samsung sy Apple, ny vidin'ny fivarotana [Xiaomi] dia manodidina ny 40% ary 75% mora kokoa. Ka laharam-pahamehana lehibe ho an'i Xiaomi amin'ity taona ity ny fampiroboroboana ny varotra ny fitaovana avo lenta, toa ny Mi 11 Ultra. Saingy ady mafy io ", hoy ny tatitra.
Ankoatry ny finday avo lenta finday, Xiaomi koa dia mizaha toetra tsena hafa. Tany am-piandohan'ity taona ity dia nibanjina ny hanao fandraharahana fiara elektrika ny orinasa ary nanambara ny drafitra hamatorany 10 tapitrisa dolara amin'ny teknolojia mandritra ny folo taona ho avy.
Oktobra 2, 2021 ao amin'ny 10: 22